Dreame L10 Pro ဖုန်စုပ်စက်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဈေးနှုန်း | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 21/11/2021 16:00 | အခြားကိရိယာများ, reviews
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်လာတာပေါ့။ ရှားပါးသုံးသပ်ချက် အဲဒီအပိုင်းတွေလောက် Androidsis တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား Android စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို အမြဲယူဆောင်လာပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအချိန်တွင် အကောင်းဆုံး gadget များအကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကို ဖြည့်စွက်ပေးသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုလည်း သင့်အားပြောပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရက်အနည်းငယ်ကြာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Dreame L10 Pro ဖုန်စုပ်စက်.
တစ် လက်ရှိ အလိုအပ်ဆုံး gadgets များ အိမ်အတွက် စက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောရင် L10 Pro ကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် သင်သည် အိမ်တွင်း အလိုအလျောက်စနစ် မလိုအပ်ပါ။ စမတ်ကျသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဖုန်စုပ်စက် အားထုတ်စရာမလိုဘဲ အိမ်သန့်ရှင်းအောင် ထိန်းထားနိုင်ပါစေ။ ဘာဖြစ်သလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအကူအညီဖြင့် အချိန်တိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။.
1 အချိန်ကုန်သက်သာပြီး သင်နှင့်ဝေးသောအခါ သင့်အိမ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
2 Dreame L10 Pro ဖုန်စုပ်စက်ကို ဖွင့်ထုတ်ခြင်း။
3 Dreame L10 Pro ၏ ရုပ်ထွက်နှင့် ဒီဇိုင်း
4 Dreame L10 Pro သည် ၎င်း၏အလုပ်အား မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
5 Dreame L10 Pro နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ဇယား
အချိန်ကုန်သက်သာပြီး သင်နှင့်ဝေးသောအခါ သင့်အိမ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ဖုန်စုပ်စက်ရှိခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ရုံဖြင့် ကြီးမားသောတိုးတက်မှုဟု ယူဆနိုင်သည်။ သို့သော် ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ ပေးဆောင်သည့် တကယ့်ကြိုတင်တိုးတက်မှုမှာ ထိုသို့ဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ် ညစ်ပတ်သည် (ရည်ရွယ်ထားသည်) ငါတို့အိမ်မှာမရှိရင်တောင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Appအိမ်သန့်ရှင်းရေးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: Xiaomi က Inc က
Dreame L10 Pro ပါရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်တိုးတက်မှု ထို့ကြောင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အခြားအရာအားလုံးထက်၎င်း၏ရလဒ်များကိုကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိစေရန်။ နှမြောဖို့ပါဝါ စုပ်ယူခြင်းအတွက်၊ တုန်လှုပ်စရာမလိုအပ်ဘဲ အတားအဆီးများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်aအလုပ်ကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပကတိမျက်စိဖြင့် သိသာသည်။ ကဲ Dreame L10 Pro ကို ဝယ်လို့ရပါတယ်။ Amazon တွင် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် 10 ယူရို၏ ထပ်လောင်းလျှော့စျေးကူပွန် DML10PBF နှင့်အတူ။
ဖုန်စုပ်စက် ဖောက်ထုတ်ခြင်း။ Dreame L10 Pro
အဲဒါဆို ဘာလုပ်မလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့်စာရင်း L10 Pro ဘောက်စ်အတွင်းတွင် ဖုန်စုပ်စက်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါရှိသည်။ အခြေစိုက်စခန်းအားသွင်းပါဝါကြိုးကို ချိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်စုပ်ရန် လွယ်ကူသောနေရာတွင် ထားရှိပါ။r ၎င်းသည် မည်သည့် မျက်နှာပြင်တွင်မဆို လုံးဝခိုင်မာပြီး အခြားမော်ဒယ်များလောက် မတက်ပါ။
အကွက်ထဲမှာလည်း တွေ့တယ်။ side brush ဒါမှ အိမ်ရဲ့ ထောင့်တိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ဟိ အစိုင်အခဲများအတွက်ကန် နှင့် အရည်များအတွက်ကန်လဲလှယ်နိုင်သော၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ထည့်သွင်း၍မရသော၊ နောက်ဆုံးတော့, ကြမ်းတိုက် ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်။
Dreame L10 Pro ၏ ရုပ်ထွက်နှင့် ဒီဇိုင်း
Dreame L10 Pro ၏ ဒီဇိုင်းသည် စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်မှ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သောအရာ၏ 100% အတွင်းတွင် အကျုံးဝင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ထားသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးမည့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောရပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ၎င်းတွင်တစ်ခုရှိသည်။ အလင်းဆုံပုံသဏ္.ာန်စျေးကွက်ရှိအခြားမော်ဒယ်များကဲ့သို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံနမူနာယူထားကြသည်။ တောက်ပအနက်ရောင်အရောင်Dreame L10 Pro ကို အဖြူရောင်နဲ့ ဝယ်လို့ရပေမယ့်။ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရော်ဘာပစ္စည်းဖြင့် ကာကွယ်ထားသော အစွန်းများဖြင့် ခိုင်ခံ့သော ပလပ်စတစ် ပရိဘောဂ မပျက်စီးစေရန်၊
သင်၏ Dreame L10 Pro ကို ယခုပဲ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Amazon တွင် €10 လျှော့စျေးကူပွန် DML10PBF ကို အသုံးပြုပါ။
ထိပ်မှာကျနော်တို့ကရှာပါ လေဆာအာရုံခံကိရိယာတည်ရှိရာ ဘဲဥပုံ မော်ဂျူး. ဤအရာသည် လေဆာ၏ ခုန်ပေါက်မှုနှင့်အတူ၊ အတားအဆီးများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ဧရိယာကို မြေပုံဆွဲနိုင်သည်။ သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာ။ ဒီအပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများ. အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်အဖြစ် ခလုတ်သုံးခု။ ဖုန်စုပ်စက်ကို အားသွင်းဌာနသို့ ကိုယ်တိုင်ပေးပို့ရန် လုပ်ဆောင်ပေးမည့် ပင်မခလုတ်။ နှင့် ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော သန့်ရှင်းရေးနှင့် စနစ်ထည့်သွင်းမှုအတွက် ထိန်းချုပ်ခလုတ်။
el en တိုကျရိုကျ ဖုန်စုပ်စက်၏ Dreame L10 Pro တွင် မည်သို့ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရသည်။ အရာဝတ္ထုများကို ထောက်လှမ်းရန် အသုံးပြုမည့် လေဆာထုတ်လွှတ်မှု နှစ်ခု နီးစပ်မှု သို့မဟုတ် နိမ့်သောပရိုဖိုင်ကြောင့် အထက်အာရုံခံကိရိယာကို မတွေ့ပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် အခြားသော ဖုန်စုပ်စက်များ မတွေ့နိုင်ဘဲ တိုက်မိခြင်း သို့မဟုတ် ဆွဲငင်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထဲမှာ အောက်ခြေ ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ဘီး သူ့မှာရှိတယ်။ Dreame L10 Pro သည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုကြီးသည့်အပြင်၊ အတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားရန် ဖုန်စုပ်စက်ကို အပြည့်အဝမြှင့်တင်ပေးသည့် ရှပ်တစ်ခု 20 မီလီမီတာအထိမြင့်မားသည်။ ငါတို့မြင်တယ်။ စုပ်ယူမှုဇုန်ဘယ်အပိုင်း၊ side brush. ဤမော်ဒယ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲများအတွက် တိုင်ကီကို တပ်ဆင်နိုင်သည့် အပိုင်းဖြစ်ပြီး အဖုံးကို ရုတ်သိမ်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အပေါ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။
Dreame L10 Pro သည် ၎င်း၏အလုပ်အား မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
၎င်းကို အိမ်တွင် ရက်အနည်းငယ်ကြာ စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏အလုပ်ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အတည်ပြုနိုင်သည်။ ဘယ်သွားမလဲ။အိမ်အတွင်းရှိ ပရိဘောဂများ လုံး၀ မရှိတော့သည့် ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး၊ အရာအားလုံး လုံးဝ လုံးဝ သန့်ရှင်းပါတယ်။. အချည်းနှီးမဖြစ်ပါဘူး။ 4.000 Pa စုတ်ယူခြင်းပါဝါအချို့သော ကေဘယ်ဖုန်စုပ်စက်များထက်ပင် ပိုပါသည်။ စုပ်ယူမှုပါဝါနှင့် သန့်ရှင်းရေးထိရောက်မှု လိုအပ်ပါက၊ Dreame L10 Pro ကို ရယူလိုက်ပါ။ Amazon တွင် ကူပွန် DML10PBF ကို အသုံးပြုပါ။
Su လမ်းကြောင်းမျက်နှာပြင်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပုံဖော်လိုက်သည်နှင့်၊ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသည်. ၎င်းသည် နံရံနှင့် အလွန်နီးကပ်သောကြောင့် စွန့်ပစ်ရန်နေရာမကျန်တော့ပါ။ ၎င်း၏ဘေးဘက် စုတ်တံကြောင့်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ပေါင်မုန့်အစအနများ မရှိပါ။ သင်၏လေဆာနှင့်၎င်း၏စာဖတ်ခြင်း။ "အတားအဆီး" မှ ပရိဘောဂနှင့်မထိစေရ။. ပြီးတော့ ထိုင်ခုံအောက်ကနေ ဒါမှမဟုတ် စားပွဲပေါ်ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်အောင် ထိန်းပေးတယ်။
ပထမ ကျော်ဖြတ်သည်။ Dreame L10 Pro သည် အနည်းငယ်နှေးကွေးပြီး ၎င်းသည် ပုံမှန်အချိန်မဟုတ်ပေ။ ပထမဆုံး သူလုပ်တာက အိမ်မြေပုံတစ်ခုလုပ်ပါ။. အိမ်ကို အခန်းတွေနဲ့ ခွဲထားတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဇုန်အလိုက် သတ်မှတ်မည့် ဧရိယာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။. ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် အကြိမ် အဆက်ဆက် စတင်သည့်အချိန်တိုင်း တူညီသောလမ်းကြောင်းကို အမြဲလိုက်နေလိမ့်မည်။ AND သန့်ရှင်းရေးသည် အချိန်နှင့်သုံးစွဲမှုတွင် ပိုမိုထိရောက်မည်ဖြစ်သည်။.
La အလိုက်သင့်နေထိုင်နိုင်ခြင်း ဖုန်စုပ်စက်က တကယ်ကို အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ အတားအဆီးအသစ်တစ်ခုစီကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန် လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ထိရောက်အောင် လုပ်ပါ။ အခြေအနေတိုင်းတွင် ဘက်ထရီအားသွင်းရန် မလိုအပ်မီ ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြင့်ဆုံးသန့်ရှင်းရေးကို လုပ်ဆောင်ရန် အတိုဆုံးလမ်းကြောင်းကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
La mop function ပါ။ အခြားမော်ဒယ်များကဲ့သို့စနစ်နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ စတင်သည်။ အရည်လောင်း ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းနဲ့ အောက်ကြမ်းပြင်ကို စိမ်သွားသည်အထိ၊ထို့ကြောင့် ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသက်သွင်းရန် ကန်ထဲမှာ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ရေထည့်ရမယ်။ y ကြမ်းတိုက် တွယ်ကပ်. ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းကို နေရာချခြင်းဖြင့် သင်သည် ရောစပ်သည့်အလုပ်၊ ပထမဖုန်စုပ်ခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် တူညီသောနေရာကို ပွတ်တိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြမ်းတိုက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အလွန်ဆင်တူသော်လည်း ကန်ထဲသို့ ရေထည့်စရာ မလိုပါ။
Dreame L10 Pro နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ဇယား
ပုံစံ L10 Pro ကို
ဆူညံသံ 54 dB
စုပ်ယူနိုင်စွမ်း 4000 Pa
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မိနစ် ၂၄၀ အထိ
အချိန်အားသွင်းသည် ၂၄/၇၂ နာရီ
ရှုထောင့် 350 350 96 မီလီမီတာ
အစိုင်အခဲအကြံပေးအဖွဲ့စွမ်းရည် 570 ml
အရည်ကန်ပမာဏ 270 ml
အလေးချိန် 3.7 ကီလို
စြေး 399.99 €
ဝယ်ယူ link ကို Dreame L10 Pro
€ 10 ၏လျှော့ကုဒ် DML10PBF
လျှော့စျေးကူပွန်သက်တမ်း ၁၉-၁၁ မှ ၂၉-၁၁
စွမ်းအား စုပ်ယူမှု 4000 Pa.
သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။ မတူညီသောနေရာများနှင့် အခန်းများ။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် မိနစ် ၂၀ အထိ သို့မဟုတ် 250 စတုရန်းမီတာ။
ဆူညံသံ စုပ်ယူမှုပါဝါဖြင့် ရှင်းပြထားသည့်အရာသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ကော်ဇောထောက်လှမ်း ပြဿနာတစ်ခု၊ ထူလွန်းလျှင် ၎င်းကို အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် နားလည်ပြီး ရှောင်ရှားသည်။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: နိုဝင်ဘာလ 21 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: နိုဝင်ဘာလ 19 2021
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Dreame L10 Pro ဖုန်စုပ်စက်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဈေးနှုန်း
1 ခုနှစ်တွင် Formula 2021 ကို အခမဲ့ကြည့်ရှုနည်း